Toamasina – Page 2 – Midi Madagasikara
Toamasina : Mpangalatra solika narendriky ny lakana
Redaction Midi Madagasikara 7 mars 2014 Mpangalatra solika, Toamasina
Sendra ny tsy nampoiziny ireto olona dimy voalaza fa avy nangalatra solika. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa be dia be gazoala nangalarin’izy ireo. Natao tao anaty lakana izany niaraka taminy namakivaky ny ranomasina. Noho ny lanjan’izy ireo niaraka tamin’ny solika anefa, rendrika ilay lakana ary dobo tany izy rehetra ireo. Ny vaovao hatrany no nahalalana…